Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadu qabsadeen degmada Adigrat – Xeernews24
Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadu qabsadeen degmada Adigrat
Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadu qabsadeen degmada Adigrat oo ah magaalada madaxda 2aad ee maamulka Tigreega, sida uu baahiyay gudiga degdega ah ee dawladu u xil saartay arrimaha gobolka. Waa magaaladii 3aad ee ciidamadu qabtaan ilaa shalay.
Dawlada ayaa horay u qabatay magaalooyinka taariikhiga ah ee Axum iyo Adwa. Ciidamada ayaa xaqiijiyay in TPLF ay kala kulmeen iska caabin. Waxay intaa ku dareen, in TPLF xidhay wadooyinka. Ciidamadu ma sheegeen khsaaraha soo gaadhay dhankooda ama ay gaadhsiyeen waxa ay ugu yeedheen falaagada danbilayaasha ah ee TPLF.
Maamulka Tigreega ayaan wali ka hadal guulaha ciidamada dawlada iyada oo ay adag tahay inla xaqiijiyo xogaha labada dhan.
Dhanka kale, Ethiopia ayaa diiday xogo sheegaya in ergo ka socota gudoomiyaha sanadakan ee Midowga Afrika ay u kala dab qaadayaan labada dhan, balse warbixinta dawlada ayaa lagu tilmaamay in Abiy Ahmed ergada la kulmi doono. Gudiga xaalada degdega ah ayaa sheegay in xogaha dhaxdhaxaadinta ka hadlaya ayna sal iyo raad lahayn.
Madaxweynaha Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa, ayaa sameeyay guddi 3 xubnood ah oo la kulma dhinacyada isku haya colaada, sida lagu faafiyay ilo wareedyo kala duwan. Ethiopia ayaa dhowr jeer ku celcelisay in ayna wax wada xaajood ah la yeelan doonin taliska TPLF. Dawlada ayaa xustay in ujeedada gulufkeedu yahay in kala danbaynta iyo sharciga lasoo celiyo; iyo in maxkamad la hor keeno danbilayaasha TPLF.
Haddii guulaha ciidamadu sheegteen dhab yihiin ma muuqato sabab Ethiopia ula hadasho TPLF oo ay u aragto cadow sii liicaya, laakiin waxaa jira cadaadis beesha caalamka kaga iminaya dawlada oo lagu dalbayo inla helo hab loo caawiyo barkacayaasha ku xaniban goobaha colaada. Ururada samafalka iyo Qaramada Midoobay ayaa codsanaya inay helaan wadiiqo la mariyo gargaarka.
Lama cadayn karo khsaaraha ka dhashay dagaalka laakiin waxaa la qiyaasaya in boqolaal ama kumaakum labada dhan ah ku naf waayeen, halka boqolaal kun ku barakaceen ama qaxeen. Wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegtay inay heshay muqaalo lagu qaaday dayax-gacmeed oo muujinaya dhismayaal badan oo wax ku noqday degmada Dansha oo ah meelihii ciidamadu ugu hor qabsadeen.
Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadu ku siqayaan Meqelle oo ah bartilmaamedka ugu qiimaha badan ee ciidamadu hiigsanayaan. Qabashada Meqelle ayaa wajiga dagaalka badali karta. Magaalada ayaa ah goobta ay gabbaadka ka dhiganayaan madaxda iyo saraakiisha maxkamadaha Ethiopia amreen inl qabto si sharciga loo hor keeno.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2020/11/ethiopie-tigre-adigrat-la-cathedrale-catholique-cp68ak.jpg 962 1300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2020-11-21 11:58:382020-11-21 11:58:38Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadu qabsadeen degmada Adigrat
Gudoomiyaha Aqalka Sare oo Magacaabay xubnaha doorashada xildhibaanada gobolada... Khasaaraha Itoobiya Ka Soo Gaadhay Dagaalka Tigrey-ga Iyo Khudbadii Madaxweynaha...